नेपाली कामदारको होटलमा बास, भारतीय नागरिक धमाधम साउदी उड्दै । – Yuwa Aawaj
जेठ ९, २०७८ आइतबार 571
Prevराजेन्द्र महतोको दलको नेताको पद खा’रेज, ओलीको कदमलाई साथ दिने सांसदलाई पनि कार-वाही गरिने ।
Nextबाबुरामले भने – अक्सिजन,आइसीयू,भेन्टिलेटरको हाहाकार छ, सत्ताको फोहोरी खेल कहिलेसम्म ?
ओलीले नेपाल र रावललाई कार’बाही गरेपछि झाँ’क्रीले भनिन्- ‘हेक्का होस् ! पृथ्वी गोलो छ ।